China GD-KB-001: 20 inch vana vana bhasikoro, zvinodzora kubaya humbowo bhasikoro, vana bhasikoro, simbi furemu, vakomana bhasikoro, kurovedza mavhiri fekitori uye vagadziri GUODA
GD-KB-001: 20 inch vana vana bhasikoro, zvinodzora kubaya humbowo bhasikoro, vana bhasikoro, simbi furemu, vakomana bhasikoro, kurovedza mavhiri
FOB Mutengo: US $ 38 / Chidimbu
Min.Order Uwandu: 300 Piece / Zvidimbu
Vana vachanakirwa nemhepo kumeso kwavo uye nekumhanyisa pasi munzira yemugwagwa neBike. Wide ekudzidzisa mavhiri anowedzera kugadzikana paanenge akatasva, uye anokwanisa kubviswa zviri nyore kana mwana wako agadzirira.
DZIMWE DZIMA 20
Plastic akamedura BK
Pashure: GD-ETB-018: 36v250w mota, Derailleur SHIMANO 370, Mileage 60-80 km
Zvadaro: GD-KB-002: 20 inch vana bhasikoro ine disc brake kamwe chete, green bhasikoro, vakomana bhasikoro, Contracted dhizaini
Vana vachanakirwa nemhepo kumeso kwavo uye nekumhanyisa pasi munzira yemugwagwa neBike. Iyo ine yakapfava maitiro uye yakanaka mukati-pakati peiyo modhi yeanotangisa freestyler. Iyi bhasikoro ine akafanana maficha eiyo yakakura-vhezheni vhezheni, asi inokodzera mukomana mudiki uyo asina kunyatso kugadzirira kuzere-saizi. Yakavakwa nesimbi simbi yekusimba uye inouya nemavara anobviswa ekudzidzisa mavhiri ekuchinja kwakanaka. Bhasikoro revana ava rine chigaro chechigaro chine padhi yakanaka uye mabhureki emaoko kuve nechokwadi chekumira kwakachengeteka.
vana bhasikoro revakomana
vana gomo bhasikoro
Mwana mudiki Bike